दुईतिहाइ बहुमत त हिटलरको पनि थियो, विवेक गुमाउँदा के भयो ? विश्वप्रकाश शर्मा [अन्तर्वार्ता]
काठमाडौं – विश्वप्रकाश शर्मा नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता र प्रखर वक्ता मानिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका कमजोर भएको भनेर बाहिर टिप्पणी भइरहेको समयमा उनी कांग्रेस नमूना प्रतिपक्ष बनेको दाबी गर्छन् ।
‘लोकान्तर शो’का लागि दिलनिशानी मगरसँगको कुराकानीमा विश्वप्रकाशले हिटलर नबन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सुझाव दिए ।
डा. गोविन्द केसीलाई कांग्रेसले उचालेको, सरकारलाई काम गर्न नदिएको, स्ववियु चुनाव तथा कांग्रेसमा फेरि उठेको शीघ्र महाधिवेशनको माग बारे के भने ?
माघ १७, २०७५ मा प्रकाशित